Maitiro Ekubatanidza muCalifornia - Faira Sangano kana LLC
﻿﻿Kupinza muCalifornia kuri kuramba kuchizivikanwa nevanamuzvinabhizimusi uye vanhu vane pfungwa dzebhizimusi vari kutsvaga kuwedzera kukosha kwekambani yavo uye kugona kukwezva vatengesi pavanenge vachidzikisa mukana wavo wechikwereti. Kupinza muCalifornia kunopa vagovani chengetedzo kubva kuzvikwereti zvebhizinesi uye kumatare edzimhosva, zvingangoita mutero mabhenefiti, uye kuwedzera zvakavanzika. Pane zvinhu zvinoverengeka zvinofanirwa kutarisirwa usati wafunga kuti California California mubatanidzwa ndiyo yakanakira kambani yako. Kana izvi zvinhu zvichishanda kwauri uye bhizinesi rako, saka California Incorporation inogona kupa mukana wakakura kwauri nekambani yako.
Zvakanakira kusanganisa muCalifornia
Tine zvese zvinyorwa zvesangano zvekubatanidza, kuumba kana kuronga chero chepamutemo chinzvimbo mudunhu reCalifornia. Izvi ndizvo zvikamu zvegwaro pasuru iyo inodikanwa neiyo California Secretary of State kuumba bhizinesi idzva
Kune mamwe magwaro emutemo eCalifornia ekuumbwa kwebhizinesi nyowani, kugadzirisa uye kugadzirisa kwemakambani, unogona kufonera mumiriri panhamba iri papeji rewebhu kana zadza fomu rekubvunza.
California Kufaira Zvinodiwa uye Matipi
Pakutanga madhairekitori runyorwa harudiwe, zvisinei kana madhairekitori akanyorwa pane zvinyorwa zvekubatanidzwa, vese madhairekitori anofanirwa kusaina uye kubvuma zvinyorwa.
Pakutanga madhairekitori ekambani haafanire kutumidzwa mazita uye zvinyorwa zvekubatanidzwa zvinogona kuitwa nemubatanidzi.
Yese bhizinesi nyowani inosanganisirwa muCalifornia inofanirwa kusanganisira yekutanga mumiririri webasa rehurongwa. Makambani Akabatanidzwa anopa ino sevhisi yemahara neese akazara epakeji epakeji.
Makambani anotenderwa kuburitsa kirasi imwe chete yemasheya anofanirwa kuona huwandu hwese hwenzvimbo dzakabvumidzwa kupihwa muzvinyorwa zvekubatanidzwa.
California bhizinesi bhizinesi kumisikidza fizi inoratidzwa pano yakajairwa nyika mafirita fizi iyo isingasanganisi yekumhanyisa kana inokurumidza sarudzo dzebasa.
koparesheni Dzimba Stock Corporation $100 01 / 2008
koparesheni Dzimba Dzisingabatsiri Corporation $30 01 / 2008
koparesheni Kunze Corporation $100 01 / 2008
Limited Liability Company (LLC) Zvinyorwa zveSangano $70 04 / 2007
Yakatemerwa Kubatana (LP) Chitupa cheKushoma Kudyidzana $70 01 / 2008
General Partnership Chirevo cheKubatana Kwesimba $70 11 / 2006
Inodzvinyirira Dhinari Partnership (LLP) Kunyoreswa Zvikwereti Chikwereti Kudyidzana Kunyoresa $70 01 / 2007
California Incorporation - Zviitiko zvekufunga nezvazvo
Sarudzo yekuzvipinza iwe kana kambani yako muCalifornia inofanirwa kunge ichivakirwa pazvinangwa zvebhizimusi zvekambani yako, kwaunoda kuitisa bhizinesi, uye kwaunofunga kubhanga nekumisikidza nzvimbo dzemari / dzechikwereti. Kana ruzhinji rwebhizinesi rako richifanira kuitiswa mudunhu, uye iwe uchifunga kuvhura account nekumisikidza mitsara yechikwereti kubhangi reCalifornia, saka zviri nyore kuona kuti iyi ndiyo nyika yaunofanira kuisa mukati. nekuti izvi ndezvekuti mamwe matunhu (seCalifornia) ave kuita hukasha zvakanyanya nezvekuchera mukutengeserana kwekambani uye nhoroondo yebhangi, kunyanya kana bhizinesi rese richiitwa mudunhu irori, zvakadaro kambani inosanganisirwa mune yakasarudzika, yakaderera-mutero uye mutemo wenyika. Aya matunhu ari kuwedzera kuziva mutero wemari yavari kusiya kumakambani "ekune dzimwe nyika" uye vari kuona zvichiita zvemari kuchera zvakadzika. Kupfuurirazve, kusanganisira mudunhu iwe pakupedzisira uchaitisa bhizinesi rakanyanya mukati kunoponesa yako mubatanidzwa kubva pakubhadhara yakanyanya franchise fizi mune dzinopfuura nyika.
Ipo California inogona kunge isingave nzvimbo yemitero (nehurumende yemubatanidzwa mutero ingangoita 9% maringe nemubatanidzwa wemubatanidzwa mutero we35%) nekuti inobhadharisa "mutero wekambani," kusanganisira apa inogona kupa mari yakawanda uye mutero mabhenefiti kukambani yako kana sarudzo dzakafanira dzekuumbwa dzinoitwa.
Izvo zvakare zvakakosha kuti urangarire kuti iwe unocherekedza iwo akajairika maficha emakambani kana yako kambani yaumbwa. Izvi zvinobatsira kuve nechokwadi chekuvimbika kwe "yako veil veil" uye kukupa iwe nekambani yako nechisimba, aseti, uye mutero kuchengetedzwa uye mabhenefiti ayo anosanganisira muCalifornia anogona kupa.
Kufunga kuti iwe zvechokwadi unofunga kuita bhizinesi muCalifornia, kumisikidza kutsika kwemari ipapo, uye nekucherechedza zviri pamutemo, saka zvine musoro kufunga kuisa muCalifornia.
Zvakanakira Kupinza muCalifornia
Kudzivirirwa Kwemidziyo kubva kuMutoro. Kupinza muCalifornia kunopa kudzivirirwa kweVatariri uye maDhairekitori kubva pachikwereti pachedu pamhosva dzipi nedzipi kana zvikwereti zvebhizinesi zvinobva mukushanda kwesangano kana nezviito zvakaitwa panzvimbo pekambani. Iyo saizi yekuratidzwa kwechikwereti inogumira kune huwandu hwekutanga kudyara.
Stock Kuchinja. California makambani anogona kutengesa, kuendesa, chipo, kana kutenga masheya eayo ega emakambani stock. Sangano rinogona kuburitsa stock yemari, chivakwa uye masevhisi. Vatungamiriri vanogona kuona kukosha kana kukosha kwechitoko, uye sitoko inogona kunge iri mune chero fomu inogoneka: chivakwa, kukosha kwemari, mari yemvura, nezvimwe.
Kuvimbika. California Incorporation ichawedzera "kuvimbika" kwekambani yako, uye ichawedzera huwandu hweanofarira investor mukambani yako. Inotaura nezve "rakakomba bhizinesi" kana yako kambani ichibatanidzwa.
Management Kuchinja. California inongoda matatu mahofisi chinzvimbo: mutungamiri, mukuru wezvemari uye munyori. Idzi nzvimbo nhatu dzinogona kuzadzwa nemunhu mumwe. Kana mubatanidzwa weCalifornia uine vagovani vaviri, panofanirwa kuve nenhengo mbiri dzeBhodi. Kana paine vangangoita vatatu vanogoverana, saka panofanirwa kuve nenhengo nhatu paBhodi.
Kuvanzika. Ivo chete director uye vamiririri vanogara ndivo vanofumurwa senge inyaya yeruzhinji rekodhi muCalifornia. Mazita evatengesi haisi nyaya yezvinyorwa zveruzhinji. Kupfuurirazve, zvinoenderana nerudzi rwekuumbwa (LLC, nezvimwewo), mubatanidzwa unogona kubata zvikamu zvemasheya.
Mutero Makomborero. California mubatanidzwa mutero inongova 9%, iine mikana yakakura inowanika zvichienderana nerudzi rwekambani yakaumbwa.
California ine yakakwira huwandu hwevanhu vanoisa yavo vega-vanozvishandira emitero inodzoka murudzi, ine yechitatu yepamusoro vanhu veMakambani uye iri nhamba yekutanga kana zvasvika kuMakambani Liability Makambani akaumbwa. Kupinza muCalifornia kunogona kupedzwa mumaawa mashoma se4 neClass A yakamhanyisa masevhisi kana iwe unogona kusarudza kupinza muCalifornia mumaawa makumi maviri nemana neClass B yakamisikidzwa kufaira. Ndokumbira utarise kuti Makambani Anopindirwa anoita ese anodikanwa magwaro uye kuendesa kwauri sechikamu chebasa redu uye anotambanudzira ese mamiriro ekukurumidza nyika kune vatengi vedu.
Iwe unogona kuisa epamba Stock (General For Profit), Nyanzvi, Isiri-purofiti uye Masangano ekunze muCalifornia. Mamwezve ruzivo pa Mhando dzesangano. Makambani Anopindirwa anokwanisa kugadzirira uye kufaira zvinyorwa zvako nehurumende kune chero mhando yeCalifornia Corporation, zvisinei yedu otomatiki online maitiro inopa kune epamba masheya emakambani, fomu rakajairika remubatanidzwa. Kuti ubatanidze muCalifornia, kuumba bhizinesi rezvemhando ipi neipi, Zvinyorwa zveInorporation uye mashoma 2 makopi ezvinyorwa anoendeswa kuhofisi yebazi yakakodzera yenyika. Makopi ese ari maviri achasimbiswa neMunyori weHurumende pasina muripo wekuwedzera, mamwe makopi anofanirwa kuendeswa pamwe chete ne $ 8 yakasimbiswa kopi yemari. Hofisi yebazi reSacramento ino faira uye kurekodha zvakatumirwa mukati kana zvinyorwa zvakaunzwa nemaoko, zvikasadaro magwaro ako ANOFANIRA kuendeswa nemaoko kune chero rimwe hofisi rebazi. Pre-clearance uye yakakosha ruoko iripo chete inowanika muSacramento, kwete kumatunhu mahofisi.
Makambani Akabatanidzwa anobata zvese zvako zvinyorwa zvekugadzira, kuendesa uye kufaira nehofisi yenyika kune vese vatengi vedu. Tichaendesa nemaoko zvinyorwa zvako kuhurumende nemari yekufaira uye chero imwe mari yenyika. Sisitimu yedu inoita kuti tikwanise kutaura takananga kumahofisi ehurumende. Isu ndiyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekubatanidza muCalifornia.
Ndokumbira utarise: Paunoumba California Corporation, iri pasi pefranchise mutero zvinodiwa kudzamara yanyungudika zviri pamutemo. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve California Franchise Mutero pawebsite yeFranchise Tax Board.
LLC - Yakatemerwa Dhizaina Kambani Kurovedza
Kugadzira Yakatemerwa Liability Kambani (LLC) iri kuramba ichiwedzera kufarirwa, iri bhizimusi idzva bhizinesi ine yakanyanya kuchinjika. Unogona kusanganisa muCalifornia, uchiumba iyo LLC kana mubatanidzwa nenzira yakafanana nenzira. Kune zvimwe zvinhu zvakasiyana zvehurongwa zveV LLC, pamwe nekuwedzera mutero kupatsanurwa kunowanikwa. Kana yako LLC isingabhadhariswe mutero sekambani kune Franchise Mutero Bhodi zvinosungirwa gore rega rega, hushoma huri madhora mazana masere uye mubhadharo zvichibva pamari yegore rose yekambani. Mamwe mashoko pamusoro LLC Mutero Kurongwa.
Kuwedzera Zviwanikwa Kupinza muCalifornia
Mamwe emahofisi ehurumende nehurumende anogona kuve anobatsira kana iwe uchibatanidza muCalifornia, zvinoenderana nerudzi rwechinhu chaunoumba, kwawakabatanidza uye mhando yebhizinesi rako.
Franchise Mutero Bhodhi - ruzivo nezve franchise mutero zvinodiwa.
Bhodhi reEqualization - ruzivo maererano nemutero wekutengesa uye kushandisa mutero mutero.
Dhipatimendi reMakambani - ruzivo maererano nekuburitswa uye kutengeswa kwechengetedzo muCalifornia, Franchise Investment Zvemutemo Zvinodikanwa, Pfuma Yevako Brokers Mutemo uye Escrow Mutemo zvinodiwa.
Dhipatimendi reinishuwarenzi - ruzivo maererano neinishuwarenzi mupi uye inishuwarenzi zvinodiwa.
Kupatsanurwa kweMari Masangano - ruzivo maererano nesangano remari masangano, mabhangi uye yemakambani zita chimiro zvido.
Dhipatimendi reVatengi - ruzivo maererano nezvinodiwa zvakati kuti zvine rezinesi.
Yekusimudzira Dhipatimendi - ruzivo maererano nehurema uye kushaya kweinishuwarenzi mutero.
Dhipatimendi Rehukama Hwezvemaindasitiri, Chikamu cheVashandi Mubhadharo - ruzivo maererano nezvinodiwa zvemubhadharo wevashandi.
Guta uye / kana County secretary uye / kana rekodhi iko kunowanikwa nzvimbo huru yebhizinesi - yeruzivo maererano nezve marezinesi ebhizinesi, mazita emabhizinesi ekunyepedzera (kana uchiita bhizinesi pazita risiri iro zita rekambani), uye nezvezvimwe zvinodiwa maererano nekukamurwa kwenzvimbo, mvumo dzekuvaka, nezvimwewo zvichibva pamabasa ebhizinesi e California mubatanidzwa.
Yemukati Revenue Service (IRS) - ruzivo maererano neFININ, kana Federal Mushandirwi Kuzivikanwa Manhamba, Mutero ID yemabhizimusi masangano.
California Expedited Kufaira Services
Paunosanganisa muCalifornia, unogona kusarudza yakajairika kugadzirisa kunogona kusvika kumavhiki e4-6 muhofisi yehurumende kungotendeuka nguva. Iko kune yakapusa yekumhanyisa kusimudzira iyo inogona kuita kuti nyika itendeuke yako kusefa mune mashoma seavhiki maviri. Pane nzira mbiri dzekuwedzera kuti zvinyorwa zvako zvigadziriswe nehurumende mumaawa makumi maviri nemana kana mana. Kirasi A uye B yakamhanyisa sevhisi.
ZVINODA PRE clear 4 Hours $500 Zvinyorwa zvakaunzwa na10: 00 AM, unenge uine maficha ekupindura kana kusimbiswa na2: 00 PM
Class B 24 Hours $350 Zvinyorwa zvakaunzwa na11: 00 AM, unenge uine maficha ekupindura kana kusimbisa rinotevera bhizinesi zuva na11: 00 AM
Ndapota onai: Kirasi A inoda pre-clearance mvumo nemari yekuwedzera yehurumende uye nguva dzekugamuchirwa, saka Makambani Akabatanidzwa haapi kirasi iyi. Kirasi B ndeyemakambani chete. Iko hakuna 24 awa yeV LLC's kunze kwekunge muridzi akaendesa tsamba kuhurumende nezve chikonzero chekukurumidza. Iko nyika ichatendera kana kuramba chikumbiro zvichibva pamaonero avo.
Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti kuisa muCalifornia kunopa huwandu hwakawanda hwezvibatsiro nenzira yekudzivirirwa kubva pachikwereti, kuchengetedzwa kwemidziyo, mutero, uye kushanduka kwebhizinesi. Kana iwe ukabatanidza muCalifornia uchaita kuti kambani yako iwedzere kuvimbika, uye kuwedzera kutendeseka ichave nzira yakanakisa yekukwezva vatengesi nguva yese ichichengetedza avo vanevowo masheya kubva pachikwereti. Nekushingairira kuita uye bhizinesi kusimudzira zano, iwe unogona kuvaka rako bhizinesi kuita rakakwikwidza kwazvo, mari-inokwezva chinhu
California Zvinyorwa zveIn Incorporation
Chisungo I: Zvinyorwa zvacho zvinofanirwa kusanganisira chirevo chezita rekambani.
Tarira: iro zita rinofanirwa kunge riri chaizvo sezvaunoda kuti rionekwe pane zvinyorwa zveCalifornia Secretary of State.
Chisungo chechipiri: Ichi chirevo chaicho chinodiwa neCalifornia Corporations Code uye hachifanirwe kuchinjwa.
Chinangwa chekambani kuita chero chiitiko chepamutemo kana chiitiko icho a
mubatanidzwa unogona kuve wakarongeka pasi peGeneral Corporation Mutemo weCalifornia imwe
pane bhizinesi rebhangi, bhizinesi rekambani yekuvimbika kana maitiro ehunyanzvi
inobvumidzwa kuverengerwa neCalifornia Corporations Code.
Chisungo chechitatu: Iwo zvinyorwa zvinofanirwa kusanganisira zita remumiriri wekutanga webasa rehurongwa.
Kana munhu akasarudzwa seanoshanda, sanganisira bhizinesi remumiriri kana pekugara
kero yemugwagwa muCalifornia (PO PO kero haigamuchirwe). Ndapota usadaro
shandisa "mukutarisira" (c / o) kana kupfupisa zita reguta.
Kana rimwe sangano rakasarudzwa semumiriri, usasanganise kero ye
Cherechedza: Rimwe boka risati rasarudzwa semumiriri, mubatanidzwa unofanirwa
vakambomhan'arira kuna Secretary of State chitupa chinoenderana neCalifornia
Kambani Kodhi chikamu 1505. Mubatanidzwa haugone kuita sewewo mumiririri uye
hapana mubatanidzwa wekunze kana wekunze anogona kufaira zvichienderana neChikamu 1505 kunze kwekunge iyo
mubatanidzwa parizvino une mvumo yekuita bhizinesi muCalifornia uye iri mune zvakanaka
yakamira pane zvinyorwa zveCalifornia Secretary of State.
Chisungo IV: Zvinyorwa zvacho zvinofanirwa kusanganisira chirevo chenhamba yezvikamu zvese zvichaitwa nekambani
kupihwa mvumo yekuburitsa.
Cherechedza: Zvikamu zvisati zvatengeswa kana kupihwa iyo kambani inofanirwa kutevedzera iyo
Corporate Chengetedzo Mutemo unofambiswa neCalifornia department reBusiness Oversight. Ruzivo maererano nemvumo yekupa masheya runogona kuwanikwa kubva pawebhusaiti yavo pa http://www.dbo.ca.gov/Licensees/Corporate_Securities_Law/ kana kufonera California department reBusiness Oversight ku (916) 327-7585.
Kuuraya: Zvinyorwa zvinofanirwa kusainwa nemumwe mubatanidzi, kana nemutungamiriri wega wega wekutanga anonzi
zvinyorwa. Kana vatungamiriri vekutanga vakatumidzwa mazita, maneja wega anofanira kusaina uye
bvuma zvinyorwa. Ongorora: Kana vatungamiriri vekutanga vasina kutumidzwa mazita muzvinyorwa, iyo
munhu (s) arikugadzira gwaro ndiye mubatanidzi (s) wesangano. Iyo
zita remubatanidzi wega wega kana wekutanga director vanofanirwa kunyorwa pasi pemasaini avo.
California Secretary of State Mahofisi Mahofisi
San Francisco Dunhu Hofisi
Fresno Yenharaunda Hofisi
Los Angeles Dunhu Hofisi
300 South Spring Street, Kamuri 12513
San Diego Dunhu Hofisi
Sanganisa muCalifornia Pano﻿
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Zvita 22, 2021